CPU-X iyo CPUFetch: 2 barnaamij oo waxtar leh si loo arko xuduudaha processor-ka | Laga soo bilaabo Linux
Ama sababo farsamo awgood (cilmi baaris ama dayactir) ama sababo xiiso leh iyo u habeyn awgeed (Maalmaha Desktops), ee loogu talagalay kombiyuutarka xiisaha leh GNU / Linux, had iyo jeer waa muhiim inaad awood u yeelatid inaad si fudud ku ogaan karto oo xitaa si raaxo leh ula socon karto Qiimaha CPU kombiyuutarkaaga. Tanna, waxaa jira codsiyo "CPU-X" iyo "CPUFetch".
Sidaa darteed "CPU-X" iyo "CPUFetch" waa 2 codsi oo xiiso leh oo waxtar leh oo fududeeya muujinta iyo kormeerka xuduudaha CPU kumbuyuutar kasta, garaaf ahaan iyo terminal ahaanba, wuxuu naga badbaadinayaa adeegsiga barnaamijyo waaweyn sida Hardinfo iyo Lshw-GTK ama Kormeerayaasha kale ee Qalabka, ama yutiilitida ama amarada amarka ee terminal si loo ogaado faahfaahinta Qalabkayaga sida lshw, inxi iyo cpuinfo.
Tan iyo, boostadani waa mid waqtigeedii la bixin karo xog dheeraad ah ku saabsan barnaamijyada iyo amarrada hore loogu soo sheegay tuducyada kor ku xusan, markaa qaar ayaan ka tagi doonnaa xiriiriyeyaasha qoraallada hore si ay u sahamiyaan, markay dhammeeyaan daabacaadan:
"HardInfo waxay muujineysaa faahfaahinta qalabka la isticmaalay, laakiin ka duwan lshw, waxay sidoo kale muujineysaa xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan nidaamka qalliinka, jawiga desktop-ka, xilliga shaqada, modullada firfircoon ee firfircoon, luqadaha la heli karo, macluumaadka nidaamka faylka, iyo kuwo kale. Marka ay timaado macluumaadka qalabka, tani way ka faahfaahsan tahay lshw, laakiin waa dareen badan iyada oo ay ugu wacan tahay isku xirkeeda saaxiibtinnimo. Sidoo kale, Hardinfo waxay u oggolaaneysaa inay maamusho tijaabooyin waxqabadyo kala duwan (calaamado)." 3 qalab si aad u ogaatid qalabka nidaamkaaga
3 qalab si aad u ogaatid qalabka nidaamkaaga
Amarada si loo ogaado nidaamka (aqoonsashada qalabka iyo qaar ka mid ah qalabka software)
1 CPU-X iyo CPUFetch: barnaamijyada GUI iyo CLI si ay u daawadaan macluumaadka CPU
1.1 Waa maxay CPU-X?
1.1.1 Soo dejiso, rakibo, isticmaal iyo shaashadda shaashadda
1.2 Waa maxay CPUFetch?
1.2.1 Soo dejiso, rakibo, isticmaal iyo shaashadda shaashadda
CPU-X iyo CPUFetch: barnaamijyada GUI iyo CLI si ay u daawadaan macluumaadka CPU
Waa maxay CPU-X?
Sida laga soo xigtay degel rasmi ah ee barnaamijka la yiri, waxaa lagu sifeeyaa inuu yahay:
"CPU-X waa barnaamij bilaash ah oo ururiya macluumaadka ku saabsan processor-ka, Motherboard-ka, iyo waxyaabo kale oo badan."
Intaa waxaa dheer, waxay bixisaa faahfaahin dheeraad ah sida:
CPU-X waa codsi nidaam kormeer iyo muuqaal ah (oo la mid ah CPU-Z-ka Windows), laakiin CPU-X waa bilaash iyo furfuran software loogu talagalay GNU / Linux iyo FreeBSD.
Waxaa loo isticmaali karaa qaabka garaafka iyadoo la adeegsanayo GTK ama qaabka qoraalka iyadoo la adeegsanayo NCurses.
Waxaa hadda lagala soo bixi karaa adiga 4.2 version, gudaha Qaababka ".AppImage", "tar.zg" iyo "zip", labadaba bogga rasmiga ah iyo bogga rasmiga ah ee GitHub.
Kiiskayaga isticmaalka, waxaan ku dhejin doonnaa adoo isticmaalaya Qaabka ".AppImage" si loo soo dajiyo oo ay maamulaan, si fudud oo dhaqso on our Nidaamka hawlgalka loo adeegsaday (MilagrOS -> Respin oo ku saleysan MX Linux).
Sida ku cad shaashadaha soo socda:
Waa maxay CPUFetch?
Sida laga soo xigtay bogga rasmiga ah ee GitHub ee barnaamijka la yiri, waxaa lagu sifeeyaa inuu yahay:
"CPUFetch waa qalab raadin qaab dhismeedka processor fudud laakiin xarrago leh."
Intaas waxaa sii dheer, waxaa habboon in la muujiyo tan qalab khad amar fudud (CLI) soo socda:
Waxay lamid tahay Neofetch, laakiin waxay diirada saareysaa helitaanka iyo soo bandhigida qaab dhismeedka processor-ka CPU Linux, Windows, MacOS iyo Android Operating Systems.
Muujiya astaanta soo-saaraha (tusaale ahaan, Intel, AMD) oo ay weheliso macluumaadka aasaasiga ah ee CPU, oo ay ku jiraan macluumaad muhiim ah, sida kuwa soo socda:
Tiknoolajiyada Semiconductor ee nanometer (nm)
Soo noqnoqoshada ugu badnaan
Tirada xudunta iyo dunta
Kordhinta Vector Sare (AVX)
Tilmaamaha Isku-Darka-Isku-Darka ama Isku-Darka-Isku-Darka / FMA-ga
L1, L2, iyo L3 cabbirka kaydka
Waxqabadka ugu badan.
Isku mid ayaa noqon kara hadda soo dejiyey oo lagu rakibay GIT keydkaaga GitHub. Oo waxaa hadda laga heli karaa in aad 0.94 version.
Kiiskeenna wax ku oolka ah, waxaan sidoo kale ku dhejin doonnaa annaga Nidaamka hawlgalka loo adeegsaday (MilagrOS -> Respin oo ku saleysan MX Linux) soo socda amarrada amarrada soo socda:
Nota: Sida aad u jeeddo, Soo jiidashada CPU Intaa waxaa sii dheer waa dhameystir aad u fiican oo loo dabaaldego Desktop Jimcaha.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «CPU-X y CPUFetch», 2 codsiyo xiiso leh oo waxtar leh oo fududeeya muujinta iyo kormeerka xuduudaha CPU kombiyuutar kasta, garaaf ahaan iyo terminal ahaanba; waa mid aad u danaynaysa oo waxtar leh, dhammaanteed «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » CPU-X iyo CPUFetch: 2 barnaamijyo waxtar leh si loo eego xuduudaha processor-ka
Shopify waa xubinta cusub ee Shabakadda Hal-abuurka Furan